Iwo akanakisa manomano eShoko | Gadget nhau
Iwo akanakisa manomano eShoko
Kunyangwe paine dzimwe nzira dzakasiyana dzatinadzo mumusika kana tichinyora zvinyorwa zvemavara, tichigadzira maspredishiti kana mharidzo, mhinduro iyo Hofisi inogara ichitipa ndiyo inonyanya kushandiswa, uye nekudaro, yakanyanya kukosheswa mumusika, kunyangwe hazvo isiri yemahara.
Nemakore angangoita makumi mana mumusika, Shoko rave pane zvaro zvoga iro rakanakisa izwi processor, izwi processor rinotipa huwandu hwakakura hwemabasa, mazhinji acho asingazivikanwe mabasa asi izvo zvinogona kutibatsira kuwedzera kugadzirwa kwedu zuva nezuva.
Huwandu hwemabasa pamwe nemikana iyo Shoko rinotipa inogutsa zvido zvevashandisi vese, kusanganisira nyanzvi. Kana iwe uchida kuziva kumwe kwekuita kunopihwa neIzwi, ini ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga, nekuti chokwadi uchaona mabasa ausina kuziva iwe aigona kuita neMicrosoft Word.
1 Tsvaga uye kutsiva mazwi
2 Duramazwi reMashoko
3 Tsvaga mazwi padandemutande
4 Dudziro gwaro, ndima, kana mutsetse
5 Gadzira zvinyorwa zvisina kujairika
6 Tora zvakare faira isina kuchengetedzwa
7 Chengetedza gwaro rine password
8 Wedzera watermark
9 Sevha muPDF fomati
10 Gadzira mapepa
11 Wedzera maumbirwo kune zvinyorwa
Tsvaga uye kutsiva mazwi
Kana tapedza basa, zvingangoita kuti mushure mekuriongorora, takaperetera izwi, izwi rataifunga kuti tinogona kupotsa kusvikira taritarisa kunze kweduramazwi reIzwi. Muzviitiko izvi, kunyanya kana gwaro iri rakakura kwazvo, Shoko rinotibvumira kwete chete kutsvaga iro izwi kuti riishandure, asi zvakare rinotibvumidza kutsiva otomatiki kune chaicho.
Iri basa rinowanikwa mubhokisi rekutsvaga riri mu yekumusoro kurudyi kona yekushandisa.
Kunze kwekusanganisira imwe yeakanakisa chiperengo uye girama macheki ayo atinogona kuwana nhasi mune chero kunyorera, seyakanaka izwi processor inokodzera munyu wayo, zvakare inosanganisira duramazwi remazwi akafanana, duramazwi rinotibvumidza kutsiva izwi rakasarudzwa nezwi rinoreva zvakafanana zvinokodzera zvinyorwa.
Kuti uwane iyo Duramazwi reMashokoIsu tinongofanirwa kusarudza izwi uye tinya kurudyi mbeva bhatani uye nekuisa mbeva pane maSynonyms sarudzo, sarudzo icharatidza rondedzero neanoreva zvakafanana neshoko ratiri kutsvaga.
Tsvaga mazwi padandemutande
Kana isu tiri kunyora gwaro uye isu tisina kujeka kana izwi ratakashandisa riri rechokwadi, chinhu chinowanzoitika kukanda bhurawuza iro timu yedu inofanirwa kuve nechokwadi. Neraki, Microsoft yakafunga izvo uye inotipa iyo yakavakirwa-mukati internet izwi rekuwana mukushandisa chaiko. Chinhu ichi chinonzi Smart Search.
Kuti tishandise basa iri, tinofanirwa kusarudza izwi riri kutaurwa, tinya bhatani chairo uye sarudza Smart Search. Panguva iyoyo, ichave kuratidzwa kurudyi rwekushandisa, mitsva yekutsvaga muBing yezwi iro, kuti tikwanise kutarisa kana rakanyorwa nemazvo, kana riri iro izwi ratange tichitsvaga kana tichifanira kuramba tichitsvaga.
Dudziro gwaro, ndima, kana mutsetse
Kana nekuda kwebasa rako, chitandadzo kana kudzidza, uchiwanzomanikidzwa kubvunza kana kunyora magwaro mune mimwe mitauro, Microsoft natively inotipa muturikiri, muturikiri ane basa rekushandura roga gwaro kana chete iwo mavara atakasarudza. Muturikiri uyu anobva kuMicrosoft uye haina chekuita neGoogle.
Kana iwo mavara atinoda kushandura, haisanganisi mazwi akawandisa, iyo dudziro ichave yakanyatsoita uye inonzwisisika. Uyu mushanduri akabatanidzwa anotipa zvakafanana mhedzisiro seye muturikiri weGoogle.
Gadzira zvinyorwa zvisina kujairika
Kana isu tikamanikidzwa kunyora magwaro ekuzadza zvipuka mugwaro, pepa rekushambadzira kana chero imwe mhando yefaira, tinogona kuenda kukopa nekuteedzera zvinyorwa kubva kune mamwe magwaro. Shoko rinotipa mhinduro yakapusa pane iri diki diki. Kunyora = rand (nhamba yendima, nhamba yemitsara), Izwi rinotiratidza huwandu hwendima dzakagadzirwa nemitsetse yatatsanangura.
Chinyorwa chinotiratidza, kwete chaizvo zvisina kujairika, zvaunoita kudzokorora uye nekudzokorora iwo muenzaniso wenyaya watinogona kuwana mufonti yatinoshandisa mugwaro ratiri kugadzira.
Tora zvakare faira isina kuchengetedzwa
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko, waona kuti komputa yako yakavharika zvisingatarisirwi, simba rabuda, wapera bhatiri ... kana chero chimwe chikonzero, hauna kutora chengetedzo yekuchengetedza gwaro. Kunyangwe zvingaratidzika sedambudziko risinganzwisisike, zvakajairika kupfuura zvaunogona. Zvakajairika, zvekuti kune akati wandei vhezheni, isu tine mukana we tora gwaro reIzwi ratisina kusevha.
Chengetedza gwaro rine password
Kana chete tikashandisa zvishandiso zvedu, uye ichichengetedzwa nepassword yatinoziva chete, hazvidi kuchengetedza magwaro atisingade kuti vamwe vanhu vaone. Kana isu tichida kugovana gwaro nevamwe vanhu, pasina vanobvumidza vamiriri kuwana, zvakanakisa zvatinogona kuita ndeizvi chengetedza ne password. Zano: usatumira password yekuwana pamwe chete nefaira.
Kuti tidzivirire gwaro, tinofanirwa kubaya paMenyu menyu bhari uye pane Dzivirira gwaro. Shoko ichatibvunza isu mapassword maviri, kuvhura gwaro uye kurigadzirisa. Iri password harifanirwe kunge rakafanana mune zvese zviitiko, nekuti havazi vese vanogamuchira gwaro rakafanana vangangoda kurigadzirisa.
Kana gwaro ratiri kugadzira riine zvinangwa zvekutengeserana, kudzivirira kushandisa nzvimbo mumusoro wepamusoro kuisa data redu, tinogona wedzera watermark isinganzwisisike kumashure, watermark iyo inogona kuve ese ari maviri mavara mavara uye nemufananidzo fomati. Zviripachena, kana isu tisingade kuti ibviswe, kana tichigovana gwaro isu tinofanirwa kuzviita mune imwe fomati isiri yeIzwi, semuenzaniso PDF, kana kuchengetedza gwaro kuitira kuti pasave neanogona kurigadzirisa.
Sevha muPDF fomati
Kungofanana neIzwi rave muyero muindasitiri yemakomputa, iyo PDF (Adobe) fomati fomati zvakare. Kutenda neizvi, Izwi rinotibvumira kusevha mafaera muPDF fomati, fomati yakanaka yekugovana magwaro atisingade kuti agadziriswe nemupi wedu. Iyi sarudzo inowanikwa mukati meSave senge sarudzo uye nekudzvanya pakudonhedza pasi mafomati ayo aanotipa.
Rimwe remabasa mashoma anozivikanwa eShoko ndiko kuita kwe gadzira maposta nekutenda kuIzwi Art basa, chimwe chekaresa cheichi chishandiso uye icho chakashandiswa kakawanda muma90s kugadzira maposta. Iri basa rinotibvumidza isu kunyora chinyorwa uye nekuchipa iyo chimiro uye vara ratiri kuda.
Wedzera maumbirwo kune zvinyorwa
Basa rine chekuita nemifananidzo yakajeka iyo Shoko reArt inotipa, ndiko mukana wekuwedzera manhamba, chero zvinyorwa zvemavara, miseve inonongedza, moyo, denderedzwa, maumbirwo ejometri… Iyi mifananidzo inoiswa sekunge yaive mufananidzo, saka inobatwa zvakafanana nemifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Applications » Iwo akanakisa manomano eShoko
Rima modhi inouya ku iPhone uye yako Android foni, maitiro ekuishandisa
Yenhema coronavirus yambiro nefoni 632282524